Sawirro: Soomaali ku dhamaatay duqeyn ka dhacday dalka Yaman. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Sawirro: Soomaali ku dhamaatay duqeyn ka dhacday dalka Yaman.
On Mar 18, 2017 257 0
Diyaaradaha dowladaha Carabta ee duqeymaha kawada dalka Yaman ayaa duqeeyey doon ay saarnaayeen inkabadan 100 Ruux oo u badnaa dad Soomaali ah kuwaas oo ka tagay dalka Yaman kuna sii jeeday dalka Suudaan.
Dadka la duqeeyay oo ahaa Qaxooti Soomaali oo watay aqoonsiga hay’adda Qaramada midoobay u qaabilsan arimaha Qaxootiga ayaa saarnaa doon yar, waxaana gantaal ku dhuftay diyaarad nooca Abatsh ah oo aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee ay u beegsatay doontan shacabka siday.
Ugu yaraan 40 Ruux oo Soomaali ah una badan dumar iyo Caruur ayaa geeriyooday, waxaana jira dhaawacyo kale kuwaas oo la keenay magaala xeebeedka Al-Xudeyda oo ah halka ay markii hore dadkan ka ambabaxeen kuna taalla dalka Yaman.
Sawirro la soo qaaday waxay muujinayaan meydad is garab yaala oo ay caruur ku jiraan.